प्रकासित मिति : १९ बैशाख २०७७, शुक्रबार प्रकासित समय : ०७:४६
काठमाडौँ, वैशाख १९। सरकारले कोभिड–१९ को कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत, करछुट तथा सुविधा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै राहत माग गर्ने श्रमिक तथा मजदुरलाई स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका कार्यमा लगाइने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, क्षेत्र र आम नागरिकका लागि सरकारले तत्कालीन राहतका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता डा। खतिवडाका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद (दसौँ संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । २०७६ साल जेठ २३ पछि २०७७ वैशाख १४ सम्म ठेक्का सम्झौता भई काम अगाडि बढेका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई एक वर्षसम्म सम्झौता विस्तार गर्न सकिनेगरी नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनाले २१ दिनभित्र म्याद थपको निवेदन दिएका आयोजनाको कार्यप्रगतिको आधारमा एक वर्षको सम्झौता विस्तार गर्न सकिने जनाइएको छ ।
श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउनसमेत सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । यस्तै उद्योग व्यवसायको संरक्षणका लागि सरकारले यसअघि कार्यान्वयन गरेको राहत, करछुट तथा सुविधालाई लकडाउनको अवधि बढ्दै गएकाले पुनरावलोकनसहित थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसअघि चैत १६ मा सरकारले प्रारम्भिक राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।
प्रवक्ता डा. खतिवडाका अनुसार स्थानीय तहले राहत पाउनुपर्ने परिवारको लगत तयार पारेपछि राहत माग गर्ने परिवारका सदस्यलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत गराइनेछ । श्रम कार्यक्रममा आउन नचाहने व्यक्तिले राहत माग गर्न आएमा दैनिक ज्यालाको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको खाद्यान्न उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।
सो प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, स्थानीय तहका विकास कार्यक्रम र कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपकार कोषमा रहेको रकमसमेत परिचालन गर्न सक्नेछ । स्थानीय र प्रदेश तहमा स्थापना भएका कोरोना उपचार कोषमा रहेको रकम अपुग भएमा केन्द्रीय उपचार कोषबाट समेत उपलब्ध गराउने प्रवक्ता डा। खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
सो कार्यमा सहयोग गर्न चाहने गैरसरकारी संस्था वा व्यक्तिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तोकेको क्षेत्रमा राहत उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । राहत उपलब्ध गराउँदा गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, बालगृहमा रहेका बालबालिका र टुहुरा बालबालिकाका लागि स्थानीय तहले संरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
प्रवक्ता डा। खतिवडाका अनुसार राहत दाबी गर्ने व्यक्तिले परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएको, औपचारिक रोजगारीमा नभएको र आयआर्जनको वैकल्पिक उपाय नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । गलत घोषणा गरी राहत लिएको पाइएमा सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने र राहतका लागि प्रमाणित गर्ने वडा जनप्रतिनिधिलाई समेत जिम्मेवार बनाइनेछ।
इन्टरनेट, विद्युत्, ढुवानी छुटमा निरन्तरता
कोभिड–१९ सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला स्वयंसेविका, स्वयंसेवक तथा सरसफाइमा संलग्न श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक तथा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई व्यवस्था गरिएको २५ लाख रुपियाँको निःशुल्क बीमा÷क्षतिपूर्ति व्यवस्था ०७७ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ ।
पुनः कर्जा कोषमा एक खर्ब
सरकारले विद्यमान पुनः कर्जा प्रदान गर्ने क्षमतालाई एक खर्ब रुपियाँ पु¥याउने भएको छ । सो पुनः कर्जा कोषमा ६० अर्ब रुपियाँ रहेको थियो । पुनः कर्जा कोषबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर घटाउने र साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने चालू पुँजी कर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै लकडाउनका कारणले समस्यामा परेका व्यवसायले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र कर्जाको वर्गीकरण यथावत् राख्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिइएको छ । यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको यस त्रैमासिक बुझाउनुपर्ने ब्याजको ब्याजदरमा छुट दिई ऋणीलाई राहत दिने व्यवस्था मिलाउनसमेत नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारले कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को उपचार बापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश, कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन आदेश, कोभिड–१९ को उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट विभिन्न क्षेत्रमा परेको असरको सम्बोधन गर्न सामाजिक संस्था परिचालन कार्ययोजना, २०७७ समेत बैठकले स्वीकृत गरेको छ । सो कार्ययोजनाले कोरोना भाइरसका कारण महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकमा परेको र पर्न सक्ने असरका बारेमा सुधार तथा सम्बोधन गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुरे क्षेत्रको संरक्षण कार्यक्रमका लागि हरित जलवायु कोष तथा विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको करिब चार अर्ब ७९ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सो अनुदान समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृतिसमेत दिएको छ ।
लोकमार्गको काम सेनालाई
सरकारले महाकाली लोकमार्ग (दार्चुला–टिङ्कर सडक) को घाँटीबगर–टिङ्कर खण्डको ८७ किलोमिटर सडक खण्डको ट्रयाक निर्माण कार्य नेपाली सेनालाई दिने भएको छ । दार्चुला–टिङ्कर १३४ किलोमिटरमध्ये ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी ८७ किलोमिटरको ट्रयाक निर्माण सेनालाई दिने निर्णय भएको हो ।
यस्तै बैठकले लोक सेवा आयोगबाट हुने पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगबाट भएको विज्ञापन अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी सम्पूर्ण पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थगित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम सर्भे) अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ।